Xiaomi Mi Band 3 waxay ku iibisaa hal milyan oo unug gudaha Hindiya | Androidsis
Xiaomi waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee ku jira qaybta la gashado. Jijintiisii ​​ugu dambaysay waa Xiaomi Mi Band 3, taas oo lafilayo sanadkaan inuu yeelan doono dhaxal suge, kaas faahfaahinta ayaa bilaabaysa inay timaaddo toddobaadyadan. Tan iyo markii lagu bilaabay suuqa waxay u ahayd guul cusub astaanta Shiinaha. Waxay sidoo kale si fiican ugu iibineysaa suuqa Hindiya, sida ay ku dhawaaqday shirkadda lafteeda.
Tan iyo markii ay leeyihiin wuxuu ku iibiyay hal milyan oo cutub Xiaomi Mi Band 3 gudaha Hindiya tan iyo markii la bilaabay. Guul cusub oo jijimadda ah, oo qaar xidhatay iibinta wanaagsan tan iyo markii laga bilaabay dukaamada sanadkii la soo dhaafay. Marka waxay ka tarjumaysaa caan ka ahaanshaha sumcadda Shiinaha qaybtaan.
Hindiya waxay noqotay mid kamid ah suuqyada ugu muhiimsan astaanta. Waa mid ka mid ah iibiyaasha ugu fiican qeybta casriga ah. Waxyaabaha sidoo kale ku dhaca qaybta la gashan karo, sida aan hadda ku arki karno iibka wanaagsan ee Xiaomi Mi Band 3 uu haysto.
Iibka lagu gaadhay lix bilood gudahood, taas oo ah inta jijimadu ay ka jirtay iibka Hindiya. Marka aqbalitaanka ay heshay wuxuu ahaa mid wanaagsan. Marka sumaddu waxay ku sii socotaa qaabkeeda wanaagsan ee arrintan la xiriirta. Tan iyo markii iibkeedu si fiican ugu socdo suuqa, kor u kaca xaalado badan.
Dhanka kale, jijin cusub ee sumadda ayaa la filayaa inuu yimaado sanadkan. Xiaomi Mi Band 3 horeyba waxay u soo bandhigtay isbeddelo badan, gaar ahaan xagga naqshadeynta. Marka jiilkan afraad ee jijimadu si xamaasad leh ayaa loo sugayaa, maaddaama ay xiiso yeelan doonto in la arko sida summaddu ugu cusub tahay arrintan.
Waxaan si taxaddar leh ugu jiri doonnaa daahfurka jiilkiisa afraad. Dhanka kale, Waxaan aragnaa sida Xiaomi Mi Band 3 uu u noqdo guul ee sumadda. Xilligan la joogo ma hayno xog ku saabsan iibka adduunka ee arrintaas, in kasta oo ay horeba ugu jiraan malaayiin. Waxaan rajeyneynaa inaan waxbadan ka ogaanno wax yar kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Xiaomi Mi Band 3 wuxuu gaarayaa hal milyan oo unug oo laga iibiyay Hindiya
Sida looga hortago in shaashadda taleefanka gacanta ee Android aad si otomaatig ah u damiso